Ny atrikasa ara-dalàna voalohany ho an’ny bilaogera tao Shily: ny fananganana sehatra iraisana vaovao · Global Voices teny Malagasy
Ny atrikasa ara-dalàna voalohany ho an'ny bilaogera tao Shily: ny fananganana sehatra iraisana vaovao
Voadika ny 15 Mey 2018 3:03 GMT
(Marihina fa tamin'ny 14 Novambra 2005 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ny 12 novambra (2005), natao tao amin'ny Tranombokin'i “Santiago” vaovao ny “Taller Legal” (Atrikasa ara-pitsarana) voalohany indrindra no nisy tao Shily. Olona mihoatra ny 170 no nanatrika ny hetsika izay nokarakarain'ny Fikambanana Mpiaro ny Zo Nomerika .
Nanomboka tamin'ny dinidinika an-databatra nifanaovan'i Roberto Arancibia, Miguel Paz, Arturo Catalán, Manuel Contreras , Soledad Ferreiro; Christian Leal ny hetsika.
Niresaka momba ny fiarahan'ny Bilaogy sy ny fahafahana nomen'izy ireo ny olona mba hifandray amin'ny olona i Roberto. Araka ny fomba fijerin'ny gazety, nilaza i Arturo Catalán fa ” afaka mitati-baovao ny olona tsirairay na dia tsy nandia fianarana tany amin'ny oniversite aza. Miankina aminao ihany izany, fa tsy amin'olon-kafa “, raha nilaza ireo toniandatsoratra izy. “Mifaninana amin'izao tontolo izao ny mpanao gazety”.
Niresaka momba ny nanomedia Works miaraka amin'ny fandanjalanjana ara-toekarena izay mamela ny varoboba izy, noho ny fahakelezan'ny hery miasa.
Niresaka momba ny fomba ahafahan'ny bilaogy mamela ny olona hijery vaovao izay tsy voalazan'ny mpanao gazety i Manuel Contreras . Nolazainy ihany koa fa mampiasa fandikana ny zavamisy mihoatra noho ny fanomezam-baovao ny media – ary noho izany afaka mampahafantatra vaovao bebe kokoa noho ny vaovao omen'ny fampitam-baovao ny bilaogin'ny olom-pirenena- ary ireo Bilaogera no fitsapana hafanana izay mampahafantatra antsika ny olana amin'ny amin'ny fiainana andavanandron'ny olona.
Niresaka momba ny zon'ny mpanoratra sy ny etikan'ny fankatoavana ny satan'ny mpanoratra hafa i Soledad. “Sehatra hankaherezana ny maha-olombelona, ​​momba ny mari-panondroana azy sy ny vondrom-piarahamonina izany. Tsy resaka zon'ny mpanoratra no resahana fa momba ny fahefan'ilay olona “.
Nitohy niaraka tamin'ny fampirantiana miisa 3 momba “ny Fitenenana, ny Fahafahana ary ny Zo”, ny “Zon'ny Mpanoratra sy ny Creative Commons”, ary farany ny “Olana momba ny Fiainana Manokana sy ny Aterineto” ny hetsika .
Nifantoka tamin'ny andraikitry ny olan'ny fandikan-dalàna amin'ny famahanana bilaogy ny lohahevitra voalohany, izay mampanontany toy ny hoe: inona no mitranga raha misy olona maneho hevitra momba ny resaka tsy ara-dalàna, ohatra ny sary mamoafadin'ny ankizy; na inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny anjara asan'ny media sosialy sy ny famahanana bilaogy.
Nilaza ny antsipiriany momba ny fampiharana ny zon'ny mpanoratra amin'ny fanajana votoaty, sy ny fomba fiasan'ny Creative Commons amin'io tanjona io ny “Zon'ny Mpanoratra sy ny Creative Commons”. Niresaka ny olana momba ny zon'ny famahanana bilaogy any am-piasana ny dinidinika farany; ireo fepetra amin'ny famahanana bilaogy momba ny orinasa iray ary ny tokony hanajan'ny orinasa ny zon'ny olona iray (ohatra ny fandroahana) izay mifototra amin'io asa io.
Tsy misy lalàna manokana mifehy ireo olana ireo ao Shily, fa ny lalàna momba ny zon'ny mpanoratra amin'ny ankapobeny no ampiharina (izay hita ao amin'ny Fifanarahana Ara-barotra Malalaka ifanaovana amin'i Etazonia). Natao hamaritana ireo fepetra iraisana izay mety hiasa ho an'ny tambajotran'ny bilaogera ireo lahateny ireo, ary mampiditra ny fahatsapana iraisan'ny rehetra.
Ny Tranombokin'i Santiago no tranom-panjakana lehibe indrindra ao Shily, ary notokanana ny volana Novambra 2005. Ity fampirantiana ity no nanokafana ny auditorium. Momba ny hetsika, nilaza ny mpikarakara, Daniel Alvarez, hoe: “Heverinay fa sehatra fandraisana anjara ny bilaogy ary manantena izahay fa hanova ny sehatra ho an'ny vahoaka izany. Mihevitra ihany koa izahay fa tokony hanome ireo fitaovana hampivoarana ny fomba fiasa tsara indrindra.”
Mikendry ny hanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny sehatra iraisana vaovao amin'ny hetsika famahanana bilaogy antserasera ankehitriny ity fifanakalozan-kevitra ity, ho fototra ijoroan'ny fepetra ilainy amin'ny hoavy.
Ato ny sary
3 herinandro izayBolivia